Lahatsoratra nataon'i Hannah O'Brien momba ny Martech Zone
Lahatsoratra nosoratan'i Hana O'Brien
Nanoratra ho an'ny masoivohon'ny marketing nomerika i Hana O'Brien Aumcore, izay manam-pahaizana manokana amin'ny famokarana ny traikefa nomerika voalohany ampiarahina amin'ny drafitra marketing atiny avo lenta.
Sabotsy, Oktobra 10, 2020 Alatsinainy Janoary 18, 2021 Hana O'Brien
Voamarina fa ny Super Bowl isan-taona any Etazonia dia mila herin-kery 11 tapitrisa mahery hanatanterahana ny lalao manomboka. Ny marika Snack Oreo dia niandry roa taona teo ho eo nandritra ny fotoana izay tsy nihazakazaka tamim-pahombiazana ny herin'ny 11 tapitrisa kilowatt-ora ary hisy ny delestazy; ara-potoana fotsiny mba hanatanterahan'ilay marika ny punchline -n'izy ireo. Soa ihany ho an'ny orinasa cookie, taona lasa izay tao amin'ny Super Bowl XLVII, dia nisy a